Iqela leQela 15 - IiNtrogen Family Facts
I-Nitrogen Family - Element Group 15
Intsapho ye-nitrogen yiqela leqela le-15 letafile yexesha . Izinto zeentsapho ze-nitrojeni zenza iprojekthi yokucwangcisa i-electron efanayo kwaye zilandele imimiselo eqikelelweyo kwimikhiqizo yabo yamachiza.
Eyaziwayo Njengezi: Izinto zeli qela ziyaziwa nangokuthi i-pnictogens, ngelixesha elivela kwigama lesiGrike elithi pnigein , elithetha "ukunyumba". Oku kubhekiselele kwipropati yokukhangela yegesi ye-nitrogen (ngokuchasene nomoya, oqukethe i-oksijini kunye ne-nitrogen).
Enye indlela yokukhumbula ubunjani beqela le-pnictogen ukukhumbula igama liqala ngempawu yezinto ezimbini (P for phosphorus kunye neN for nitrogen). Inxalenye yentsapho inokuthiwa ngamapentel, ebhekisela kokubili kwizinto ezazisenyakatho yeQela V kunye nesimo salo sokuba neenombolo ze-valence ezi-5.
Uluhlu lwezinto kwiNtsrogen Family
I-nitrogen yentsapho iqukethe izinto ezinhlanu, eziqala nge nitrojeni kwitheyibhile yenkqubela kunye nokuhambisa phantsi iqela okanye ikholomu:
Kungenzeka into yesi-115, i-moscovium, ibonisa iimpawu zentsapho ye-nitrogen.
IiNitrogen Family Facts
Nazi ezinye iinkcukacha malunga nosapho lwe-nitrogen:
Izinto zeentsapho ze-nitrojeni ziqukethe i-atom ezinama-electron ama-5 kumgangatho wamandla angaphandle. Ezimbini zee-electron zikwiphepha eliphantsi, kunye ne-3 i-electron engapheliyo kwi-subshell.
Njengoko uhamba phantsi kwintsapho ye-nitrogen: i-radius i-radius iyanda , i- radion iyanda , i- ionization yamandla iyancipha, kwaye i- electronegativity iyancipha .
Izinto zeentsapho ze-nitrogen zihlala ziquka ama-covalent compounds , ngokuqhelekileyo ngeenombolo ze-oxidation +3 okanye +5.
I-nitrojeni kunye ne-phosphorus ayiyi-nonmetals. I-arsenic kunye ne-antimony zinyango. Bismuth yintsimbi.
Ngaphandle kwe-nitrogen, izinto zizinzileyo kwiqondo lokushisa .
Ukunyaniseka kwe-Element kwandisa ukunyuka kwintsapho.
Ngaphandle kwe-nitrogen kunye ne-bismuth, izinto zikhona kwiifom ezimbini okanye ngaphezulu ze-allotropic.
Izinto zeentsapho ze-nitrogen zibonisa uluhlu olubanzi lwezinto eziphathekayo kunye nemikhemikhali. Iimveliso zazo zingabonakali, nokuba zi-diamagnetic okanye i-paramagnetic kwiqondo lokushisa, kwaye zikwazi ukuqhuba umbane xa zishushu. Ngenxa yokuba ii-atom zenza iibhondi eziphindwe kabini okanye ezintathu, izixhobo zihlala zizinzile kwaye zinokuthi zityhefu.
Iinyaniso ze-Element ziquka idatha ye-crystal ye- allotropes eziqhelekileyo kunye nedatha ye-phosphorus emhlophe.
Ukusetyenziswa kweeNtrogen Family Elements
Izimbini zezinto, i-nitrogen kunye ne-phosphorus, zibalulekile ebomini.
Uninzi lwemoya yomhlaba lunegesi ye-nitrogen, iN2. I-Diatomic pnictogen iimlekyuli ezinje ziyakuthiwa ngama-pnictides. Ngenxa ye-valence yabo, ii-athomu ezinama-pinetide zidibaniswe ngumxhelo ohlangeneyo.
I-Phosphorus isetyenziselwa kumdlalo, izixhobo zomlilo kunye nesichumiso. Isetyenziselwa ukwenza i-phosphoric acid.
Arsenic inetyhefu. Isetyenziswe njengetyhefu kunye ne-rodenticide.
I-Antimony ifumana i-alloys.
I-Bismuth isetyenziswe kwimichiza, upende, kunye ne-catalyst.
I-Nitrogen Family - Iqela le-15 - Iipropati ze-Element
N P Njengoko Sb Bi
(° C) -209.86 44.1 817 (27 atm) 630.5 271.3
iphuzu lokubilisa (° C) -195.8 280 613 (amaqonga) 1750 1560
ubuninzi (g / cm 3 ) 1.25 x 10 -3 1.82 5.727 6.684 9.80
amandla e-ionization (kJ / mol) 1402 1012 947 834 703
irejisi yerhasi (ntambama) 75 110 120 140 150
i-radion radius (ntambama) 146 (N 3- ) 212 (P 3- ) - 76 (Sb 3+ ) 103 (Bi 3+ )
inamba ye-oxidation inombolo -3, +3, +5 -3, +3, +5 +3, +5 +3, +5 +3
bunzima (Mohs) akukho (igesi) - 3.5 3.0 2.25
sakhiwo sekristal cubic (eqinile) i cubub rhombohedral hcp rhombohedral
Imbekiselo: I-Modern Chemistry (South Carolina). Holt, uRinehart kunye noWinston. I-Harcourt Education (2009).
IsiNgesi ngeenjongo zezoNyango - Uvavanyo lweMpilo
Spondee: Inkcazo kunye nemizekelo evela kwiingqungquthela